Ndekupi kwekutarisa mutambo panguva yegore ra2021-2022? | Gadget Nhau
Ndekupi kwekutarisa mutambo mwaka uno?
Nyamavhuvhu yakafanana nekudzoka kuchinyakare, kunyangwe mumitambo mizhinji. Makwikwi emitambo anowanzo tanga mwaka wavo unoenderana kana kuenderera nawo. Saka kuti urege kupotsa chero, kubva Gadget nhau isu tichaenda kukuudza iwe kwaunogona kuona mikuru mitambo makwikwi mumwaka wa2021 / 22.
Kazhinji unotanga kutarisa nhabvu mumavhiki ekupedzisira aAugust. Pakave neumwe chete musiyano wakaita kuti zuva rifambe pakarenda uye raive gore rapfuura neCOVID. Mwaka uno uchine zvisaririra zvechirwere asi padiki padiki. Shanduko yakanaka inobvumidza veruzhinji kudzokera kunhandare, kunyange hazvo hongu, izvozvi, ine mashoma mashoma.
Saka kana iwe uri mumwe wevaya vasingakwanisi kutenga tikiti, unogona kuzorora zviri nyore nekuti iwe ucharamba uine mukana wekutarisa LaLiga paterevhizheni nemitero yese iyi yatinoudzwa mu Roams. Gore rino iyo equation yegore rapfuura inodzokororwa. Movistar neOrange ndivo chete mavhavhari aunogona kutarisa nhabvu kuburikidza neakashandura mapakeji avo, iyo Fusion neRudo mitengo, zvichiteerana.
Munyaya ye basketballZvinoenderana nedanho remakwikwi. Kana chiri makwikwi eEuropean kufanana neEuroleague, iyo Basketball Champions League kana iyo Eurocup, unogona kuona kuburikidza neDAZN; apo iyo Endesa League, muMovistar, ndiani iye ane kodzero dzenhepfenyuro dzemakwikwi aya.
Zvakadiniko nemimwe mitambo?
Mumota, makwikwi emambokadzi ari Formula 1 uye MotoGP. Kunyangwe hazvo makwikwi ane mwedzi mishoma yekuenda, iwe unogona kutora mukana wekupedzisira kurohwa. Muchokwadi, kana iwe uchichovha nemazvo, unogona ona hafu yasara yemwaka zvachose mahara. Chikonzero ndechekuti DAZN yakatora kodzero dzenhepfenyuro kusvika 2022 uye ine nguva yemuyedzo yemahara yemwedzi mumwe. Uye, zvinoenderana nezvaunoda, iwe une mukana wekunyorera kuchikuva pamwedzi kana pagore.
Uyewo, Movistar akasvika pachibvumirano neDAZN, saka iwe unogona zvakare kuona iyo enjini zvemukati kuburikidza nebhuruu opareta. Icho chikamu cheMotokari TV package, iyo inosanganisirwa mumutengo mumaviri maFusion mitengo (Fusion Plus uye Fusion Yakazara Plus 4 mitsara). Mune mamwe ese maFusion mitengo, iwe unofanirwa kubhadhara mutengo wepakeji wakakwira.
Mabhasikoro parizvino ari mukutenderera kuzere neiyo European Championship muguta reItaly reTrento. Saka kana iwe uri anoda mutambo uyu, iwe unogona kutarisa ese emakwikwi emabhasikoro kuburikidza neADZN. Iyo chikuva ine maviri maEurosport chiteshi (Eurosport 1 uye Eurosport 2), iyo ine kodzero dzekutepfenyura kune ese mabhasikoro. Muchokwadi, iyo Eurosport chiteshi 1 iri zvakare mumakambani akadai seOrange, Vodafone kana Mhandara Telco.
Iko kune zvakare mukana we ona kuchovha nevatyairi vakaita saYoigo, Movistar, Guuk kana MásMóvil. Mune ino kesi, neDAZN, iyo inosanganisirwa mune mamwe emitengo yayo zvakananga mumutengo uye mune vamwe, mutengo wakakwira uchafanirwa kubhadharwa.
Netenisi zvakafanana neicho kuchovha bhasikoro. Ehezve, zvinoenderana nemakwikwi iwe uchave nawo mune imwe nzvimbo kana imwe. Vatatu vevana Grand Slam (Roland Garros, US Open uye Australia Open) vanoonekwa paEurosport 1, inowanikwa kune vanoshanda seYoigo, MásMóvil, Gukk, Movistar, Orange, Vodafone kana Virgin Telco uye paDAZN. Kune iro chikamu, Wimbledon muMovistar, inova iyo yatenga kodzero dzekuteerera. Kubva pamitambo yepasi yakadai saMaster 1000, 500 ne250, varume vacho vanoonekwa muMovistar uye vakadzi muDAZN.
Mitambo kune dzakawanda uye nzira dzekuvaona zvakare. Iye zvino unongofanirwa kusarudza mutambo waunofarira zvakanyanya uye unakirwe nawo mumwaka unotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Ndekupi kwekutarisa mutambo mwaka uno?
Iyo iPhone 13 uye zvese zvakaburitswa neApple mune yayo Keynote
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve kusvika kweHBO Max muSpain